Fihaonana nampitsimbadika ny zava-drehetra
"Ny firaisanay dia amin’ny Ray sy amin’i Jesosy Kristy Zanany… Fa raha mandeha eo amin’ny mazava isika, tahaka Azy eo amin’ny mazava, dia manana firaisana isika, ary ny ran’i Jesosy Zanany no manadio antsika ho afaka amin’ny ota rehetra."1 Jaona 1:3,7
«Taloha aho, niaina tsy nanontany tena raha misy Andriamanitra na tsia. Tsapako ihany fa tsy maintsy nisy zavatra mahery sy lehibe kokoa noho ilay fahasambarako ao anaty fitiavan-tena. Saingy aiza ho aiza izany zavatra lavorary izany? Ny haikanto no toa hitako maneho izany, satria vavolombelon’ny fahaizan’ny olona manao mihoatra noho izay tokony ho vitany. Raha ny marina, dia tokony ho afaka nianina tamin’izany fihevitra izany aho.
Indray andro anefa dia nisy fihaonana iray nampitsimbadika ny zava-drehetra. Filazantsara no voasokatro, raha nihevitra aho fa nandray boky iray toy ny boky rehetra ihany, saingy Olona velona no hitako tao. Tahaka ny olona an’arivony maro, dia anjarako indray ny nanatrika an’i Jesosy Kristy. Tsy misy fomba hafa hanazavana izany aminao. Tamin’io andro io aho dia nahatsapa ho toy ny tonga soa teny ampitan’ny rano. Niova ny fitondrantenako, ary hafa ny fijeriko ny zava-drehetra.
Fa indrindra, hatramin’ny ninoako an’Andriamanitra, dia nahita zavatra mahatalanjona aho. Fiombonana no ilazana izany. Fifampiresahana, fifampizarana eo amin’ny Mpahary sy ny voariny. Fifampiresahana ihany koa eo amin’ny samy olombelona, indrindra fa eo amin’ny samy mpino. Io fiombonana io dia mampisy dikany ny fiainako. Tsy ny tenako samirery intsony no mahaliana ahy, fa ny olona rehetra. Ny fiombonana no mampisandratra ny fisainako hatrany amin’Andriamanitra sy ny drafi-pitiavany hatrizay hatrizay. Tsy mitoka-monina intsony aho, efa afaka manandrana sahady ny atao hoe fitiavan’Andriamanitra, dieny ety an-tany. Fitiavana hitohy any amin’ny hoavy mandrakizay.»